Fampandrenesana Famolavolana varahina, varahina, fantson-drivotra vy
Home / Applications / Induction Brazing / Fampidirana volo
Sokajy: Induction Brazing Tags: brazing amin'ny fandraisana anjara, fampidiran-doha, fomba fangalarana, fomba fanamboarana fanerena fandroahana, induction brazing, Induction Brazing Machine, Famokarana herinaratra famokarana, fanamorana ny fanalefahana ny fandroahana
Inona no fampidiran-drivotra?
Induction Brazing dia fitaovana mifandray amin'ny fitaovana izay mampiasa metaly filler (ary matetika ny solvents mpanohitra manakorontanana antsoina hoe flux) mba hanatevin-daharana metaly roa mifatotra tsy miaraka amin'ny fitaovana fototra. Ny hafanana indraindray kosa dia mameno ny filler, izay manintona ny fitaovan'ny kapilary amin'ny vatany.
Induction brazing Afaka miditra metaly maromaro, na dia mateza aza amin'ny tsy manambaka. Ny famintinana ny famotehana dia mazava sy haingana. Ambony voafaritra ny toerana voafaritra tsara, ka mamela ny faritra akaiky sy ny fitaovana tsy voafaritra. Ny fiarovan-koditra marefo dia matanjaka, mitoka-monina ary marefo. Tsara ihany koa izy ireny, ary matetika tsy mila famafazana, manodina na famaranana intsony. Ny fampidiran-drivotra indraindray dia midika ho fampidirana ho amin'ny famokarana.
DaWei Induction rafitra rafitra dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana asa an-tselatra. Hatramin'izao, ny rafitra ataontsika dia matetika ampiasaina amin'ny orinasa elektrotechnika mba hampiroborobo ireo fitaovana sy fitaovana fampifandimbiasana toy ny baoritra, tady, peratra, ordinatera sy SC. Izy ireo koa dia mitaoka fantsona solika sy AC ary manapaka ny ampahany amin'ny indostrian'ny fiara. Ny sehatry ny seranam-piaramanidina dia mampiasa ny induction mba hamelomana ny lelavon'ny lany, ny lelany ho an'ny tafo, ary ny solika sy ny rafitra hydraulic. Ao amin'ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny, ny rafi-pandaminana dia mampitombo ny fitaovana fanamafisam-peo, ny fitaovana fanamafisana ary ny toeram-piasana. Inona no fitaovana ampiasaina? ny Famokarana endri-molotra Indraindray dia misy rafitra fanamafisam-peo an-tariby DaWei.